AKHRISO: Waxyaabihii Laga Fahmay Waraysigii Dr. Gurey Fidaar Ku Dhalliilay Xukuumadda Mustafe Cagjar - Jigjigaonline
HomeSomalidaAKHRISO: Waxyaabihii Laga Fahmay Waraysigii Dr. Gurey Fidaar Ku Dhalliilay Xukuumadda Mustafe Cagjar
Jigjiga (JigjigaOnline) – Odhaahda ugu caansan ee siyaasadeed ee ay Soomaalidu kasoo dheegatay hadallada dhaxal-galka ah ee laga reebay ruug caddaayadii dunida soo maray, waa kelmadda ‘Siyaasaddu ma laha saaxiib joogto ah, laakiin waxay leedahay dan joogto ah’.
Waa hadal run ah, sababtoo ah, siyaasigu sida jirjirroolaha ayuu isku beddelaa, sababtuna, waa in hadba dhinaca dabayshu u dhacayso uu raaco. Laakiin taas beddelkeeda, waa inuu yeeshaa qiyam, yool iyo meel biyo kama dhibcaan ah oo loogu soo hagaago.
Marka uu nin siyaasi ahi ku fadhiisto kursiga madaxtinimada ee uu u halgamay, amaba uu nasiib ku helay, waxa u soo muuqda waxyaabo badan oo markii uu dibedda joogay aanu arkaynin. Waxa dusha ka fuusha masuuliyadda dad iyo dal dhan oo hantidooda iyo noloshoodaba uu ay tahay inuu waardiye uga noqdo oo uu ka ilaaliyo cid kasta oo boob isku dayda. Tani waxay ka hor timaaddaa, fikirkii ay wada aaminsanaayeen asxaabtiisii hore ee ka hor intii aanu xilka qabannin. Waxay taasi u dhacaysaa, in qofka bannaanka jooga aanu xog badan ka haynin gudaha, dareen buuxana aanu u lahayn waxa ka socda daaha-dabadiisa.
Doodda kale ee miiska imanaysa ayaa waxay tahay, in siyaasi kasta oo nin ay isku dhawaayeen uu kursiga ku fadhiisto, inuu ka doono xil amaba ugu yaraan dano kale oo shaqsi ah oo ay ka mid tahay inuu fadhiga ku cunsiiyo. Laakiin qof la dhaariyey oo iimaankiisu shaqaynayo, waxa uu ka baaqsanayaa inuu lacago si sharci darro ah asxaabtiisa ugu gunneeyo.
Haddaba nuxurku wuxuu yahay, waxa uu telefishanka Universal waraysi la yeeshay Dr. Gurey Fidaar oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka oo ku nool magaalada Addis Ababa, kaas oo hadal-hayntiisu muddoba taagnayd, loona arkayey inuu yahay siyaasi doonaya inuu majaraha u qabto DDS Mustafe dabadii. Laakiin dooddiisii iyo jawaabihii uu ka bixiyey su’aalihii waraysiga lagu weydiiyey, waxay ahaayeen kuwo aan cuntamayn, shacabka uu doonayo inuu wax ka dhex noqdana aan ka iibsamaynin.
Dr Gurey Fidaar
Tusaale ahaan, waxa la weydiiyey waxa ay madaxweynaha oo ay saaxiibbo isku dhow ahaayeen ay isku seegeen. Jawaabtiisu waxay noqotay mid aan loo fadhiyin, waxaanu ku dooday in waxyaabo badan oo ay madaxweynaha isku ogaayeen intii aanu xilka qabannin inuu ka baxay oo uu oofin waayey. Waxa kale oo uu raaciyey, in Madaxweyne Mustafe uu caayo, laakiin dooddaasi caddayn looma hayo, sababtoo ah, lama arag Mustafe Cumar oo aflagaadaynaya Dr Gurey Fidaar amaba magaciisa soo hadal-qaaday. Markii uu wariyuhu si toos ah u weydiiyey, halka uu madaxweynuhu ku aflagaadeeyey, waxa uu Gurey Fidaar ku andacooday in baro bulsho oo uu madaxweynuhu qoro uu ku aflagaadeeyo, taas oo iyaduna aan ahayn dood cuntamaysa.
Marka la isku soo wada duubo dooddii siyaasi Gurey Fidaar, waxay ahayd mid ku qotonta in waxa uu mucaaradka u yahay ay tahay inuu xukuumadda Mustafe ka waayey dantiisa shaqsiga ah, sida xil amaba lacago.
Siyaasi Dr. Gurey Fidaar iyo cid kasta oo kale oo aan ku qanacsanayn qaabka ay xukuumadda Mustafe u shaqaynayso, waxa laga filayey inay bannaanka yimaaddaan oo ay shacabka dhexdiisa ka bilaabaan doodaha iyo waxyaabaha ay saluugsan yihiin, kuna qanciyaan dhallinyarada, aqoonyahanka iyo qaybaha bulshada, tubta ay ahayd in la qaado ee uu maamulku ka leexday.
Waxa kale oo laga filayey, in ay isku abaabulaan qaab xisbi oo ay doorashooyinka soo socda ee sannadka dambe, ay ka qayb-galaan, lana loollamaan xisbiga XDS ee hadda xilka haya. Laakiin haddii ay halkaas fadhiyaan, sida ay hadda yihiin kusii jiraan, waxa la gaadhi doonaa doorashada oo mar kale uu xisbiga XDS uu kusoo bixi doono, mucaaradkuna ay halkoodii uun fadhiyi doonaan.
Maxaa laga fahmay waraysigii Dr. Gurey Fidaar?
In uu doonayey in madaxweynuhu uu isaga uun dhegaysto, ku xidhnaado oo uu qaato talo kasta oo uu soo jeediyo.
Waxa kale oo ka muuqatay, in uu doonayey inuu madaxweynaha la qaybsado xukunka iyo talada deegaanka.
Waxa kale oo laga fahmay jawaabihii uu bixiyey Dr. Gurey Fidaar, in uu doonayey in madaxweynuhu uu ka talo-galiyo go’aamada hawl-maalmeedka ee xafiiskiisa.
In dano badan oo uu ku qabay Madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar uu ka waayey Madaxweyne Mustafe.
Inuu la safnaa Cabdi Iley oo xidhiidh fiican ka dhexeeyey, sida uu isaguba qirtay intii uu waraysigu socday.
Waxa uu hadalkiisu wiiqay kalsoonidii iyo taageeradii ay shacabku u hayeen, sababtoo, fagaaraha lama imannin dood ka gadmaysa, waxaana uu u muuqday siyaasi caaddifadaysan oo si dhow u xanaaqaya.